Ihe ị ga - eme na Chiang Mai | Di na Nwunye Maka Uzo
August 18, 2019 / Ahapụ a Comment
Chiang Mai, nke ọtụtụ ugwu na ụlọ nsọ gbara gburugburu, bụ isi obodo ugwu nke Thailand. A na-ekwu na ọ bụ ebe kachasị mma maka ndị ọbịa iji nyochaa ọdịbendị Thai ma mee ihe omume na-atọ ụtọ. Nke a bụ ndepụta nke ihe ntụrụndụ na Chiang Mai, Thailand nke ndị njem nleta ọ bụla kwesịrị inwe ọbụlagodi otu ugboro na ndụ ha.
Ego: Thai Baht (gburugburu 30 baht ka 1 USD)
Ọnọdụ: Isi Obodo Ugwu nke Thailand
Oge kacha mma ị ga-eleta: Si n’Ọktọba ruo Febụwarị (okpomọkụ na-a inụ na March na Eprel)
Ationgbọ njem: traingbọ oloko abalị, abalị VIP VIP ma ọ bụ ụgbọ elu si Bangkok
Enwere ike ịchọta igwe ndọrọ ego ebe niile
Ileta Chiang Mai Ahịa
Marketshụ ahịa obodo bụ ụzọ zuru oke iji nyochaa omenaala ndị mmadụ ebe a. Mgbe ị bịara n’ahịa, ị ga-amata ụdị nri ndị obodo na-erikarị (anụ ma ọ bụ akwụkwọ nri), otu ha si ere na ịzụta ngwa ahịa, ihe ndị pụrụ iche, wdg.
Na Chiang Mai, ahịa na-apụta n'akụkụ niile n'okporo ụzọ, n'izu ma ọ bụ na ngwụsị izu, n'ehihie ma ọ bụ n'abalị. Site na nri achara, ruo nke ọhụrụ, site na akwa enyí gaa na ncheta ndị ọzọ, na ihe ndị ọzọ, ihe niile ga - enye gị ncheta echefughị ​​echefu. Nke a bụ ụfọdụ n'ime ngwaahịa ndị ama ama na Chiang Mail ị kwesịrị ịbịarute otu oge:
Market Night Saturday: Nhazi n’agbata ọnụ ụzọ ndịda nke Old Pagoda na Wua Lai Road, Market Night Saturday bụ maka gị ịzụta ihe ncheta na onyinye njem.
Market Night Sọnde: Nwere ike ịzụta ihe niile n’aka ndị na-ere ahịa na Sọnde Sọnde Sọnde, nke na-amalite na Tha Phae Ọnụ ma gbatakwa n'okporo ụzọ Rachadamnoen ruo n’obodo ochie.
Ahịa Warorot (Kad Luang): Nke a bụ ahịa ụbọchị maka ndị njem ịzụrụ uwe dị ọnụ ala na ngwa ụlọ adịghị ọnụ.
Bor Sang (Umbrella Village) Ahịa: Ndị mmadụ ebe a na-ere sọrel na ihe aka ha chọrọ mma.
Ahịa Malin: Nke a bụ ebe ama ama maka ndị ọbịa iri nri abalị, gaa zụọ ahịa, zụta ọla na uwe, ma nwee ọtiesụ na mpaghara pụrụ iche.
Isonye na mmemme oriọna
Chiang Mai bụ onye a ma ama maka emume ọkụ a na-akpọ Loi Krathong na Yi Peng. Ekwuru na oge a bụ oge kacha mma iji nwee anwansi obodo. N’ọnwa Nọvemba nke ọnwa ọ bụla, ndị mmadụ na-eziga ugba ọkụ oriọna n’igwe ka ha na-achọ ikpe ekpere maka ndụ obi ụtọ na akụ na ụba. Agbanyeghị, iji sonyere ihe omume a, ị ga-edetu ọnwa ma ọ bụ izu tupu. Ọzọkwa, ka ị na-achọ ihe dị iche iche, jide n'aka na ị na-eji ugba ọkụ achara n'ihi na ha nwere omume gburugburu ebe obibi.
Mụ na Mọnk Na-akparị ụka
Endingme ka otu onye mọnk na-ekwu okwu na ịjụ ha ihe niile gbasara ndụ ụbọchị ga-abụ ahụmịhe na-enye ọ thatụ nke onye ọ bụla kwesịrị ịgbalị. Mọnk si n'ụlọ nsọ dị na Chiang Mai dị njikere ikwu okwu na uche zuru oke, yabụ ha ga-enye gị ndụmọdụ gbasara otu esi edozi nsogbu gị nke ọma.
Iji kọọrọ gị onye mọnk, ị ga-ebu ụzọ họrọ ụlọ arụmụka nwere “Monk Chat”. Mgbe ahụ, rute ebe ahụ na Mọnde, Wenezdee ma ọ bụ n'ehihie Fraịdee (site na 5 pm ruo 7 pm) ka ịbanye (ị ga-ede aha gị na obodo gị) wee mesịa zoo ndị mọnk. Chetakwa iyi akwa kwesịrị ekwesị nke kpuchie ikpere gị na ubu gị mgbe ị na-aga ileta ụlọ nsọ.
Ileta ụlọ nsọ Doi Suthep
Ileta Chiang Mai na-agabeghị temple Doi Suthep bụ nnukwu njehie maka ndị njem niile. A na-ele nke a anya dị ka otu n'ime ụlọ ndị mara mma nke Thailand. Ọ bụrụ n’abị ebe a n’ụbọchị anwụ na-acha, ị ga-ahụ ụzọ panoramic nke obodo Chiang Mai. Visitga leta ụlọ nsọ a ama ama kachasị mma, gbalịsie ike n'isi ụtụtụ iji zere igwe mmadụ ma yie akpụkpọ ụkwụ dị mma n'ihi na ị ga na-eje ije nke ukwuu.
Getga n’ụlọ nsọ Doi Suthep, buru ụzọ, jide ụgbọ ala uhie site n’obodo ruo Doi Suthep. Ọ ga-ewe gị ihe dịka 60 Baht na nkeji 45 kachasị ka ị garuo ugwu. Mgbe ahụ, tinye awa 2 - 3 iji kwaga n’elu ugwu ahụ, ebe Doi Suthep Temple dị.
Elehụ enyí nso nso bụ otu n'ime ọrụ ndị a ga-eme na Chiang Mai ọkachasị na Thailand n'ozuzu ya. Enwere ụfọdụ nnukwu ebe nsọ ị ga-aga eleta dịka Elephant's World na Kanchanaburi, Elephant Nature Park, Kindred Spirit Elephant Sanctuary, na ndị ọzọ. Ihe bụ nsogbu bụ na ị ga-eleta nke ọma. Ọ pụtara na ịgbaso iwu siri ike nke zoo. Omume gị ga - eso mee ka enyí na ndị bi ebe ahụ bie ndụ ka mma.
Wayzọ ọzọ ị ga - eji hụ enyí bụ ime ka elele Elephant Parade Land. Nke a bụ ụlọ nke nnukwu enyí ụmụ aka tozuru oke, nke ndị na-eme ihe nkiri n'obodo na ndị mba ụwa sere. Inwe ike ịzụta ihe oyiyi ndị a dị ka ncheta maka ndị ikwu na ndị enyi gị.
Mgbago Udiri Mmiri Bua Thong (Ebe E Si Nweta)
Na-eche ọtụtụ ọdọ mmiri ndị na-amị amị n’ihi oke okwute na mmiri nke na-agba ngwa ngwa, ọ bụghị ya? Ọ bụ eziokwu, mana mmiri iyi Bua Thong na Chiang Mai dị iche. Ha bara ọgaranya na nkwụnye akụ, ya mere, oke nkume amaa jijiji. Ọ na - enye gị ohere iji ụkwụ ọtọ ọtọ. Enwere akụkụ dị iche iche nke nsụda mmiri ị nwere ike ịrị, mana isi ala bụ ihe kachasị ịtụnanya. Ọ bụ ebe ahụ ka mmiri wee daa nkwụ ụkwụ iri atọ, yabụ ọ bụ ihe ezigbo ebe maka gi ka itua n’oku n’oku. Playing gụchaa akara mmiri, ị ga-ahụ mmiri dị na steepụ dị n'akụkụ nke ọzọ mgbe ị na-agbago. Ọ bụ njigide miri emi na mmiri mmiri na-acha anụnụ anụnụ.
Chi ga-esi na Chiang Mai gaa Bua Thong Water, ị nwere ike ịgbazite ọgba tum tum wee kwaga ebe ahụ. Ọ bụrụ na enweghị obi ike, ijide ụgbọ ala uhie bụ ụzọ kachasị mma.
Tourme Njem Nri na Chiang Mai
A maara Chiang Mai nke ọma maka nri dị ụtọ ya yana klaasị esi nri. N'ebe a, ị nwere ike ịga ahịa abalị iji nwee ọ enjoyụ ọtụtụ ụdị pụrụ iche mpaghara. Achịcha na Chiang Mai na-enwekarị ahịhịa na-egbu egbu ma ọ bụ ilu. Nke a bụ ụfọdụ nri ị na-ekwesịghị iche maka n'obodo a:
Adabela azu - eghe anụ eji egbu egbu na - esi nri na - esi nri na mpaghara
Khao soi - osikapa osikapa bara ụba nke Burmese bara ụba, fesa ya na achịcha crunchy
Spired anụ minced anụ ezi mikpuo
Nam ngiao - tangal tomato noodle ofe na anụ ezi
Idingnyịnya Agbagharị Doi Suthep
Agbanyeghị na Chiang Mai bụ obodo nke anọ kachasị na obodo ọgbara ọhụrụ nke Thailand, ugwu na oke ọhịa ka gbara ya gburugburu. Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ibi nso na okike, sonye na njem ịgagharị n'ugwu. Ọ bụghị naanị na-enyere gị aka ịme ahụike gị kamakwa ọ na-ewetara gị echiche dị iche na Chiang Mai.
Gba Àmà A Muay Thai Boxing Match
Inghụ egwuregwu Muay Thai Boxing Match bụrịrị mgbe ị nwere ohere ịbịarute Chiang Mai. N'agbanyeghị, ị nwere ike isonye na klaasị na mgbatị ahụ. Trying na-anwale klaasị ma na-ele egwuregwu ga-ewetara gị mmetụta pụrụ iche.
Anyị ewetala gị ihe itoolu ị ga-eme na Chiang Mai, Thailand. E kwere nkwa ihe ndị a ga-ewetara gị oge agaghị echefu echefu n’oge njem gị. Ever gabuola n'obodo a? Ọ bụrụ ee, kọọ ahụmahụ gị. Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị na-atụ anya na isiokwu anyị baara gị uru Daalụ maka ịgụ akwụkwọ.
Onye edemede bio:
Abụ m Emily Pham. Amụrụ m na Vietnam - mba nke nwere ọtụtụ osimiri ndị a na-amaghị, saịtị ndị mere eme na ebe ndị njem. Nghọta na Vietnam n’oge a bụ ebe a ma ama, aga m edobe saịtị blọọgụ vina.com iji mee ka ndị enyi nọ gburugburu ụwa mara mma mara mma nke Vietnam. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ njem na Vietnam, blọọgụ anyị ga-enye gị ozi dị mkpa gbasara ebe ị ga-aga na ihe ị ga-eme na obodo anyị.
Category: Asia, Ozi ndị a, Thailand, Nhazi njem Tags: Asia, chiang mai, ogige ndị ọbịa, Thailand
← Ebee Ka Ịchọta Music Fado Na Lisbon, Portual
Ntuziaka akachasị achachi ihe eji emechi emekọ ihe-ndekọta, Atụmatụ na ndị ọzọ! →
Gwa m mgbe e gbakwunyere ihe ọhụrụ.